UJohn Witherspoon uthi amaBoondocks abuya ngesizini 5 - Isiko Lopop
UJohn Witherspoon uthi amaBoondocks abuya ngesizini 5
Ividiyo ayikho Iziqeshana ze-JRE
AbakwaBoondocks ibuyela esikrinini esincane ... ngokusho kukaJohn Witherspoon.
Ngesikhathi kuxoxwa muva nje nge-podcast kaJoe Rogan, lo mlingisi oneminyaka engama-77 ubudala uthe lolu chungechunge olungenanhlonipho lwe-animated luzobuyela emuva kwisizini 5. UWitherspoon uzwakalise umlingiswa kaRobert Jebediah 'Granddad' Freeman kulo lonke uhlelo lwezinkathi ezine. AbakwaBoondocks isiqephu sokugcina saqala ukuboniswa ngoJuni 2014 ku-Adult Swim.
'Ngikopopayi — yini leyo? AbakwaBoondocks ? Angizange ngiguqule izwi lami AbakwaBoondocks, ' UWitherspoon uthe lapho echaza ukuthi uhlala kanjani ethembekile kuye ngayo yonke indima . 'Futhi bayabuya: AbakwaBoondocks iyabuya ... Ungomunye wamakhathuni amahle kakhulu engake ngaba kuwo. '
kuphi izindaba zabomndeni manje
Ukubhukuda Kwabantu Abadala akuqinisekisanga AbakwaBoondocks 'imvuselelo, yize kube nokuqagela okuningi ngokubuya kwayo eminyakeni yamuva. Lolu chungechunge lwalususelwa kumugqa wamahlaya ka-AaronMcGruder futhi wakhonjiswa ngasekupheleni kuka-2005. Umphathi kaMcGruder wakhiqiza amasizini amathathu okuqala, kodwa wangabuya okwesine.
'Njengoba izwe manje lazi, AbakwaBoondocks Ngizobuya isizini yesine, kodwa angizukubuya nayo, 'ubhale esitatimendeni. Ngidalile AbakwaBoondocks emashumini amabili eminyaka edlule ekolishi, wenza amahlaya nsuku zonke iminyaka eyisithupha, futhi wayengumbonisi ochungechungeni lwe-animated kumasizini amathathu okuqala. AbakwaBoondocks kuhle kakhulu kumelela impilo yami kuze kube manje [...] Ukucaphuna umlungu omkhulu, 'iHollywood iyibhizinisi.' Futhi ukucaphuna omunye umlungu omkhulu, 'Ungabambi amagqubu.
Ngasekuqaleni konyaka, uMcGruder ukhiphe ezintsha eziyisithupha Ama-Boondocks amahlaya wamahlaya abekhuluma yonke into kusuka ekuphathweni kukaTrump kuya kuphenyo lukaMueller kuya ekunyakazeni kwe- #MuteRKelly.
yimuphi umbuso obuka i-porn kakhulu
UCharlamagne tha uNkulunkulu wabelane ngemichilo ku-akhawunti yakhe ye-Instagram, kanye nomlayezo ovela kuMcGruder:
'Ngikwenzele lokhu ukuzijabulisa (nokubona ukuthi ngisakwazi yini). Kuningi okuzayo… ukuthi kunzima kangakanani ukusho okuningi. Le micu yenzeke kuphela ngenxa yethalente elikhulu lomngani wami omuhle uSeung Kim, owenza ukugqwayiza kombukiso wakudala - futhi waba ngumuntu omatasa. Ngiyambonga futhi ngibonga uCharlamagne ngokungikhiphela lezi zinto ngenkathi ngihlanganisa i-instagram yami. '
indlela yokwenza ikhekhe le-fondant
ngubani u-jennifer lopez ophola njengamanje
saf imvubelo esheshayo indlela yokusebenzisa
nba 3 irekhodi lamaphoyinti emdlalweni